ब्रेकफास्टमा के खाने, कसरी खाने ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ टिप्स ∕ ब्रेकफास्टमा के खाने, कसरी खाने ?
ब्रेकफास्टमा के खाने, कसरी खाने ?
हेल्थ आवाज शुक्रबार, २०७६ कात्तिक १ गते, ०७:३० मा प्रकाशित
विहान उठ्ने बित्तिकै शरीर अन्य समयको तुलनामा गलेको, थकान वा कमजोर महसुुस हुन्छ । हामी सुत्दा हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण भाग निष्क्रिय रहने भएकोले रातभरिका पर्याप्त निन्द्राका बाबजुद पनि बिहान उठ्दा हामीलाई यस्तो हुने गर्दछ । निन्द्राको समयमा शरीरका बाहिरी भागहरु निष्क्रिय रहेतापनि भित्री भागहरुले भने एकैनासले काम गरिरहेका हुन्छन् ।
रातभरि सुताइको कारण केही नखाने भएकोले शरीरले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया (खाना पचाउने काम) गरिसकेको हुन्छ । अर्थात्, हामी विहान उठ्दा हामीले खाएको सम्पूर्ण खानामध्ये आवश्यक खाना फिल्टर गरेर अनावश्यक खाना फोहोरको माध्यमबाट निस्किनको निम्ति तयार भइसक्छ । त्यसैले विहानको समयमा हामीले हाम्रो पेट खाली भएको महसुस गर्दछौं ।
विशेषतः विहान खाएको खानाले हाम्रो शरीरलाई दिनभरि उर्जा दिने काम गर्दछ । विहान उठेपश्चात् हाम्रो शरीरले सबै खानाहरु पचाउने भएकोले हाम्रो पेट खाली हुने गर्दछ । तसर्थ, यस समयमा हामीलाई मन लागेको खानाभन्दा पनि हामीले शरीरलाई आवश्यक खानाहरु खानुपर्दछ । दिनभरि हाम्रो शरीरमा स्फूर्ति जगाई राख्न पनि बिहानको खाना खादा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । विहानको खानाको निम्ति आवश्यक खाना के–के हो त ? हामीले विहानको समयमा कस्तो खाना खानुपर्छ ?
उठ्ने वित्तिकै २ देखि ३ गिलास मनतातो पानी पिउने ।
उठ्ने बित्तिकै मसालेदार खाना नखाने ।
चियाको सट्टामा खाली पेटमा रुची र स्वास्थ्य स्थितीअनुसार बेसार पानी, धनियाँको जुस, हटलेमन, मेथी पानी वा कागती पानी पिउने ।
पानी पिएको ३० मिनेट जतिमा ब्रेकफास्ट लिने ।
बिहानको समय ब्रेकफास्ट नगरी सिधैं खाना नखाने ।
ब्रेकफास्टमा बिस्कुट वा फ्रुट केकको सट्टामा रोटी तथा पाउरोटी १ देखि २ वटा समावेश गर्ने ।
ब्रेकफास्ट लिएको करिब १ देखि २ घण्टाको अन्तरालमा खाना खाने ।
खाना खानुभन्दा आधा घण्टा अगाडि पानी पिउने ।
हामी नेपालीको खानामा सामान्यतयाः दाल, खाना र तरकारी हुने गर्दछ । जुन स्वास्थ्य स्थितीको हिसाबले पनि उचित मानिन्छ । तर, साधारणतयाः हामीहरु प्रत्येकको घरमा तरकारी पकाउदा आलु पनि मिसाउने बानी रहेको हुन्छ । आलु खानु गलत नभएतापनि यसमा रहेको कार्बोहाइडेडका कारण यसको धेरै सेवन गरेमा ब्यक्तिमा मोटोपनको समस्या देखिन सक्ने हुन्छ ।
तसर्थ, हामीले बिहानको खानामा, खानाभन्दा तरकारीको मात्रा बढी समावेश गर्नुपर्दछ । यसैगरी आलु मिश्रण तरकारीबाहेक पनि अन्य एक हरियो तरकारी अर्थात् सागसब्जी तरकारीको पनि समावेश गरेमा यसबाट स्वास्थ्यलाई लाभ हुने हुन्छ ।